လူ့အဖွဲ့အစည်း - အင်ကာ ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်း, ရှေးဟောင်းသု
လူ့အဖွဲ့အစည်း - အင်ကာ ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်း, ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ, ရှေးဟောင်းအီဂျစ်, လူမှုဗေဒ, အီရတ်နိုင်ငံ, မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ, သာရေးနာရေး ..
ဒ ဇင ဘ ရက တ င အဆ သတ မည ဖ စ သည က ဒ ခ စက အရ တတ ယမ ဆက လ အဖ အစည ပ ပ က လ မည ဟ ခန မ န ရသည Kaku, Michio 26 April 2004 How Advanced
ယဉ က မ လ အဖ အစည ဖ စ သည ယန ခ တ အ ဂ စ န င င တည ရ ရ န င မ စ အ က ပ င တစ လ က တ င စ စည တည ရ ခ က သည ထ လ အဖ အစည သည ဘ စ
လ မ ဗ ဒ ဆ သည မ လ မ ရ အပ အမ မ သ မဟ တ လ အဖ အစည က လ လ သည ပည ရပ ဖ စ ပ င တ မ လအစ ဖ စ ပ တ တက လ ပ အဖ အစည မ က န ယက မ န င
ယဉ က မ ဟ သည လ သ တစ ဦ အတ က ဘဝ လမ တစ ဟ သ စက လ တစ လ ဖ စ သည လ အဖ အစည မ သည မတ ည က သက သ တစ ခ န င တစ ခ တစ ဖ န င တစ ဖ ယဉ က မ သည လည
အပ ည ပ ည ဆ င ရ န င င ဆ င ရ န င ဒ သတ င အ ပ ခ ပ ရ တ အတ က သ မဟ တ လ အဖ အစည အခ အစ တ အပ င မ န င ဆက ဆ မ ပ ရန အတ က အသ ပ လ ရ က သည
က ယ အစ မ က က ယ အဖ စ အစ ထ ပ လ မ မည က ဒ ခ စက အရ ဒ တ ယမ ဆက လ အဖ အစည တစ ရပ ပ ပ က လ လ မ မည ဟ ခန မ န ရသည Kaku, Michio 26 April 2004
ယဉ က မ လ အဖ အစည တ န ထ င ရ ဒ သအဖ စ ဆက တ က တည ရ ခ သည တ က ဂရစ န င ယ ဖရ တ မ စ န စ သ ယ က ရ ဒ သက ယဉ က မ လ အဖ အစည တ ပ ခက ဟ
ဘ သ ဖ စ သည ဘ န တ က မ က သ ဃ အဖ စ သတ မ တ ထ ပ မ န မ လ အဖ အစည အမ န အမ တ ထ က က ည ည က င ရ င က သည ဗမ န င ရ မ လ မ မ အပ အဝင
က လ ဝ ကစ ဆ ဝ န သည အ န ဒ ယသမ ဒ ဒရ က န ပ မ လ အဖ အစည တစ ခ ဖ စ ပ ယန ခ တ အ ဖရ က အရ ပ င တန ဇ န ယ န င င တ င ဘက ကမ ရ တန တ င
အစ တ အပ င မ အတ က အမ လ က ခ င ခ ခ ရပ ရ ခ တ ယဉ က မ လ အဖ အစည တ ဒဏ ဍ ရ ပ ပ င မ တ င ပ ဝင ခ က သည ဂရ ဖ န ရ င န င ပ ရ န
Nurses Day, အတ က က IND က န စ စဉ မ လ ရက န တ င က င ပက ပ လ အဖ အစည အပ သ န ပ မ ဆ င ရ က မ မ အ အသ အမ တ ပ သည အန ဖ င က င ပက သည
ဖ စ သည အခ သ လ အဖ အစည မ တ င ထ အ ပ စ မ က ယ ပ င ရပ တည သ သ မဟ တ အမ ဆက ခ သ မ ဖ စ က သည အခ လ အဖ အစည မ တ င အထ သဖ င
မလ ရ န င င န င အယ လ ဂ ရ ယ န င င တ တ င တ ရ ခ ရသ လ အဖ အစည တစ ရပ ရပ အ အစ စလ မ ဘ သ အဖ စ က ပ င စ သ ဖ စ စဉ က ခ သည ထ အပ င
ထ တမ စဉ လ န င မဏ ဍ င မ က ထ န သ မ ပ မဖ စ န င သည အဆ တ င လ အဖ အစည အတ င အနည ဆ န င ဖ ည ဖ ည ခ င ပ င လ ရန လ လ သ အတ အခ မ ဖ စ သည
န င င တစ ဝန လ တ င ဘက စ ဖ ဖ တ တက လ အ င ဆ င ရ က ရ မ န မ လ အဖ အစည တ င အက မပ သည အတ အခ အယ အဆမ ပပ က ခ ပ င မ သ အ င ပည ပ စည ရ ရ
အရင ရ င ဆ င ရ ရ ရ န င ယဉ က မ ဆ င ရ က စ စမ က တရ တ လ အဖ အစည တ င မ ဖယ ရ ပစ ရန န င ရ ရ စ မ ဝ ဒက ပ တ အတ င ထ တ ဖ ရန
အဘ ဖ စ သည သ ခ တ မ ရသခ စ န င မ န င အ ပ မက ဆန မ ခ တ ပ င လ အဖ အစည အတ င မန စ မ စရ မ က လ လ ဖ ထ တ မ တ က င Franz Kafka
အတ အခ ယ ဝ ဒဆ င ရ ပည ရပ အထ ပ ဘ သ ဖ င ခ င ဟ တက ကသ လ 清華大學 လ အဖ အစည န င လ မ သ ပ ပ က င မ ဥပဒ ဒ က တ ဘ ရရ ခ က ခ န စ မ
အရ စ န ည တ င ပ ပ တ န င ရ စ န leftists ပ တ ပ ဆ က လ ပ ရ ပ တ လ အဖ အစည လ ထ အခ ပ Hamadan အ ရန အဆ ပ ပ တ ည င န င ဖ ဖ ရ ပ တ ဒ မ က
အခ မ က မ တ င ဖ န က က န ထ င က သည အ ဂ စ သည ရ ဟ င ယဉ က မ လ အဖ အစည န င ပတ သက ဂ င ဇ ပ ရမစ န င ဂရ တ စဖင ရ ပ ထ စသည အဆ က အဦ မ န င ပတ သက
အပ အဝင ဖ စ သည အခ မ သ ဆ န င င တစ န င င ဖ စ သ လည က ယ ဝခ မ သ မ သည လ အဖ အစည တစ တ တစ ပ င အတ င တ င သ ရ ပ ရ ခ င န န သ ပ ည သ တ မ
Discovery Channel ၏ Extreme Engineering ဟူသော documentary အရ ဂျပန်တို့၏ Shimizu Mega-City Pyramid အဆောက်အအုံ ပြီးဆုံးမည်ဟု စီစဉ်ထားသည်။. အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Oldbury နယူးကလိယားစက်ရုံအား ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ တွင် စတင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုသည် ၂၀၉၂-၂၁၀၁ ခုနှစ်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဟု စီစဉ်ထားသည်။. ၂၂၀၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာသည် ကာဒါချီ စကေး၏ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အရ ပထမအမျိုးအစား လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။.